Borghese Gallery muRoma | A Couple for the Road
Villa Borghese (nhasi Borghese Gallery Rome) yakasikwa kugamuchira kukosha kwakakosha kadhidheni Shipyon Borghese (Scipio Borghese), uyo aifarira zvekuunganidza mabasa oumhizha. Akanga akasiyana nekunaka kwechokwadi uye kusinganzwisisiki kwakasiyana sevatori. Kamwe iwe wakaronga rwendo rwako kuenda kuRoma uye wakawana kwaanogara, zita rake rakakurumbira ndeimwe yekutanga nzvimbo iyo inofanira kunge iri paunofamba.
Pfungwa yekusika nyika yeimba, senzvimbo yemufaro uye mufaro - Casa di Delizia, yakasimuka apo kuunganidza kwayo kwakawanda uye kwakakurumbira mu Roma uye Europe. Kuvakwa kweimba yacho kwakatanga muna 1613; yaitungamirirwa nemuvakidzani anozivikanwa Flaminio Ponzio, uye ipapo naGivanvan Vazancio. Pamusoro pemhemberero uye sarudzo yeAlgi Park yakapoteredza yakashanda Pietro Bernini, baba vekuzivikanwa Giovanni Lorenzo Bernini.
Kadhidine Borghese akaratidza kushivirira uye unyanzvi kana akangokundikana kuwana chiratidziro chaaifarira zviri pamutemo. Pakupera kwehupenyu hwake, kukohwa kwaiva nepamusoro pezvikwata zve 800 uye kuunganidzwa kwezvigadzirwa zvekare zvaisina kuenzana Roma. Ichokwadi kuti Shipyon Borghese aifarira kuti chimiro chake chekugadzira chichengetedzwe kunyange mushure mokufa kwake kusina kumira. Nokudaro, basa rinokosha rekutarisira kuchengetedzwa kwekuunganidza rakagadzwa.
Gallery Borghese iyo inowanikwa pfuma yakajeka yeunyanzvi uye yezvigadzirwa zvemifananidzo yakasiyana-siyana. Inopa vashanyi zvakajeka, maonero akasiyana-siyana uye mafaro anofadza. "Nheyo yenyika, musangano wezvishamiso uye chishandiso cheziso revanhu ..." - ndiyo nzira yakanyanyozivikanwa munyori weItaly Franceschi akanyora pamusoro peimba uye kuunganidzwa kweBorghese.
Iko kuunganidza kunowanikwa kune maviri pasi uye kunomiririra mufananidzo uye zvakavezwa zvakasiyana. Iwe unogona kurangarira mifananidzo yevatenzi vakawanda vanozivikanwa veRaissance rezvikoro zvakasiyana ikoko. Ngatitaurei pamusoro pezvinhu zvakajeka uye zvakajeka kwavari.
The Gallery of Images: Vhidhiyo, Paintings, uye Zvifananidzo.
Pintouccio (Bernardino di Betto di Biagio). Mufananidzo "Kurovererwa pamwe naJerome mutsvene naChristopher" (1475).
Mubasa rePinturicchio, muongorori wechikoro cheUmbrian, kupenya, ruvara uye kunyange kukorongedza unhu hwemufananidzo unosanganiswa nekuwedzera kwechokwadi. Iri basa ndiro basa rechokwadi tenzi.
2. Sandro Botticelli "Madonna nechecheche, Johane mubhabhatidzi, uye ngirozi" (1488).
Nyika inonyangadza yeunyanzvi Sandro inopedza kurota kwaFlorence pamusoro pake pachake pausiku quattrocento uye pamusi unofadza hwemazuva anoshusha, zera raMichelangelo.
3. Raphael Santi "Mukadzi Ane Unicorn."
Imwe yemabasa anozivikanwa zvikuru e master master. Kushanda pachora, Raphael akafuridzirwa nevakangobva kunyorwa Leonardo da Vinci, uye mashoko akawanda emufananidzo anooneka.
4. Titi Vecellio "Rudo Rutsvene uye Rwokufananidzira"
Muenzi mukuru weVenetian Renaissance, Titi akadzidza naGiorgione kuGiovanni Bellini. Mumazuva okutanga ekugadzirwa kwepfungwa, apo mufananidzo uyu wakanyorwa, wakakanganiswa navose vatenzi. Nokudaro, mafungiro asina kunaka ehomba, chirevo chisinganzwisisiki uye chakaoma.
5. Dosso Dossi "Wadhipiti weChircus, kana Melissa."
Mune unyanzvi hwemhanzi anozivikanwa ndeye kusanganiswa kwemavara, kupfekedzwa kwependi uye maitiro, kuda chimiro. Zvinhu izvi zvinonyatsooneka mumufananidzo uyu.
Correggio akagadzira nyore nyore mumweya uye kutamba mumabasa ekufananidzira. Mufananidzo wacho unobva munyaya yenyaya yekare yechiGiriki pamusoro peDanae. Mufananidzo unofadza, unoyevedza uye unoshamisa-wakatengesa wakatengwa muParis, kuzogadzirisa kukanganisa kwakaitwa neGallerie.
Hazvibviri kubuda zvisingazivikanwi zvipfeko zve tenzi mukuru Caravaggio, izvo zvakakonzera mufananidzo weEurope yose. The gallery Borghese anochengeta zvitanhatu zvemabasa ake. Zvose izvi zvinoratidzira nguva dzakasiyana dzebasa rekunyora uye zvinotakura kujeka kwehupenyu hwake, sezvazviri, nekutambudzika kwake, kushaya simba kweunhu uye kuedza kwake kuzviponesa pachake. Mharidzo chaiyo inobudiswa pamakumbo ake:
-Caravaggio "Jaya rine bhasi rezvibereko."
Mufananidzo wacho wakatanga nemifananidzo, yakaridzwa nemuvara wakajeka uye mafungiro ehurukuro.
-Caravaggio "Anorwara Bacchus."
Zviratidzo zvekutanga zvemutambo, izvo zvakaratidza mufananidzo wakakura wemuiti, wakaratidzwa mubasa iri. Akanga ari kuseka pamusoro pezvisikwa zvomunhu zvepasi; akaedza kusimudza zvishoma pamusoro paro.
Izvo zvakadzama zvinyorwa zvebasa zvebasa zvinoita kuti tifunge zvakanyanya nezvechokwadi chekusingaperi, kukunda kwemweya wemunhu pamusoro penyama, uye nzira inofanira kuendeswa kubva paupenyu hwevanhu vasina kufanira kusvika kune dzakakwirira.
-Caravaggio "Dhavhidhi ane Musoro waGoriati."
Basa rekupedzisira re tenzi uye kunzwa kwekushungurudzika kunorwadza kunobva kumufananidzo wake.
Pasina mubvunzo, mabasa akanakisisa emukuru wenyanzvi Gian Lorenzo Bernini, uyo akakwanisa kufema upenyu mu marble, ndeyezviumbwa zvakavezwa "Kubatwa kweProserpina" uye "Apollo naDaphne":
-Jan Lorenzo Bernini "Kubudirira kushandiswa."
Unyanzvi hweBaroque hwakanga huri kuratidza nguva yakaoma, uye iyi nhema yakaita kuti zvikwanise kuratidzira dhiyabhorosi yekurwisana kwakasiyana panguva yekudzingwa kwekadzikadzikadzi Prozerpin kubereka nemwari weumambo hwepasi pePuto.
-Jan Lorenzo Bernini "Apollo naDaphne."
Basa iri rakagadzirirwa kutsvaga nekurwisana, rinoratidzira nhema yomudiwa anodikamwa Apollon, pamusoro peNyph Daphne uye nezvekuguma kunosuruvarisa kunomirira munhu wese anofarira, kutsvaga maitiro anotsvedza: pakuguma, anongowona mashizha akaomeswa uye michero inovava mu ruoko rwake. Icho chimiro chekugara kwenguva refu chakapa iyi nhema kupapa Roma Urban VIII Barberini.
Kuwanda kwezviratidziro zvema gallery hazvirevi kune pfuma iri pamusoro apa. Pakati pezvimwe zvakanakisisa, imwe yakasanganiswa ndiyo mabhasi eKadhinari Spyon Borghese - chiyeuchidzo chemuvambi weiyo gurisa rinokodzerwa zvakakodzera izvi.
Category: Arts & Music, Europe, Itari, Most Popular, Uncategorized Tags: unyanzvi, bernini, borghese gallery, caravaggio, Itari, Roma, villa borghese
← Nzira Yokuita Creamy Spaghetti kuCarbonara
3 Comments pamusoro "Borghese Gallery: The Masterpieces Of Bernini And Caravaggio "
Izvo zvakakosha zvakakosha..Zvose izvi zvakavezwa zvakavezwa !!
Vongai Nokunyora iyi chinhu chinoshamisa uye mienzaniso yakabatsira zvakawanda. .fadza kuramba uchinyora
Ndinokutendai nekugovana ruzivo nesu.